CloudCraze: Ny sehatra Ecommerce namboarina ho an'ny Salesforce | Martech Zone
Alarobia 20 Janoary 2016 Zoma, Aogositra 26, 2016 Douglas Karr
Ny fironana lehibe hitantsika izao amin'ny Internet dia ny fampiharana ny B2B sy B2B2C amin'ny alàlan'ny e-varotra. Na dia manana ekipa mpivarotra aza ny orinasanao, ny fizotry ny fifampiraharahana, ny famoahana ny tolo-kevitra ary ny faktiora dia mandeha amin'ny Internet daholo. Ireo fomba ampiasaina hifandraisana amin'ny rafitra marobe, mitaky fidirana an-tsehatra amin'ny tanana, ary tsy afaka jerena amin'ny sehatra ecommerce mahazatra anao. Miova haingana izany ary ny orinasa iray nipoaka tamin'ny lazany dia CloudCraze.
CloudCraze no Enterprise eCommerce Platform voaporofo voalohany sy tokana novolavolaina tamina ny Salesforce Platform. Izy io dia manome ny fahamendrehana sy ny fahaizan'ny Salesforce mankany amin'ny lozisialy B2B eCommerce rehefa mizara data sy dingana miaraka amin'ireo depiote Salesforce CRM.
CloudCraze dia mampiasa ny angona mpanjifa B2B misy avy amin'ny kaonty Salesforce ary mampiaraka azy amin'ny rafitry ny sehatra eCommerce. CloudCraze dia miasa ho setrin'ny data an'ny mpanjifa Salesforce ary koa ny angon-drakitra nianarany hanompoana kokoa an'ireo mpanjifa mifanaraka amin'izany. Ny orinasa dia nekena tao amin'ny Forrester Wave ™: Suites B2B Commerce, Q2 2015 ary efa manompo orinasa Fortune 500, toa an'i Coca-Cola sy Barry Callebaut.
CloudCraze Features dia misy
Hiantsenana na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fitaovana rehetra - Ny User Experience dia mandeha ho azy amin'ny fitaovana finday misy Design Responsive
Mikaroha sy mijery vokatra - Mitady vokatra amin'ny anaran'ny vokatra, SKU na famaritana ny vokatra, toetran'ny vokatra
Product Details - Jereo ny antsipirian'ny vokatra ao anatin'izany ny anaran'ny vokatra, ny vidiny, ny naoty, ny famerenana, ny fiasa momba ny vokatra, ny famaritana ny antsipiriany momba ny vokatra, ny fisian'ny, naoty, ny hevitra, ny vokatra hafa, ary ny antontan-taratasin'ny vokatra.
Fampiroboroboana ny vokatra - tapakila, vokatra mifandraika ary fampiroboroboana misy manerana.
Harona fiantsenana - sarety feno fisongadinana miaraka amin'ny lisitra faniriana, teny nalaina, hetra nisaina, fandefasana, fijery baiko, opitons fandoavam-bola, fanamafisana ary mailaka.
Account Management - Tantarao ny tantara sy ny fitantanana kaonty miaraka amin'ny adiresy faktiora sy fandefasana entana.
Internationalization - vola an-toerana sy fanohanana amin'ny fiteny maro. Fanohanana ho an'ny vola 161 rehetra sy ny fiteny 64 rehetra tohanan'ny Salesforce
Storefronts misy marika - Tantano sy ampiendreha ny fivarotana tsy manam-paharoa maro.
Analytics - natsangana Analytics ary ny fampandehanana asa izay mamela anao hisambotra sy hampiharihary ny angona mety amin'ny Google Analytics hanatsarana ny fampahalalana azonao.
Mangataha Demo CloudCraze misy marika
Mipetraha tahiry finday haingana, miteraka fidiram-bola an-tserasera mandritra ny herinandro, ary mivoatra mora foana amin'ny fitomboana.
Tags: B2B Commerce Suitesbarry callebautcloudcrazecoca Colaecommerceonja forrestersaleforcevarotra ecommercesalesforce iray
20 Jan 2016 amin'ny 11:20 PM
Ny fiantsoana an'i Coca-Cola ho mpampiasa azy ve dia milaza amiko fa vokatra tsy takatry ny fahaizan'asa sy ny fahaizan'ny orinasa "kely" tena izy io?
22 Jan 2016 amin'ny 3:14 PM
Ny mety dia raha mampiasa Salesforce ho CRM afovoany ho an'ny mpanjifanao ianao dia mety hanana mpihaino marobe. Ny mizana Salesforce manomboka amin'ny kely ka hatramin'ny orinasa, ka ny vinavinako dia mety ho orinasa eo anelanelan'ny habe ianao alohan'ny hampiharana sehatra e-varotra manokana ho azy.